Sivavanye ikhamera yokujonga i-Reolink Argus PT | Ndisuka mac
Sivavanye ikhamera yokujonga i-Reolink Argus PT
Enye yezinto esinokukhetha kuzo ukuba silawule indawo kukufakwa kweekhamera zokujonga. Ngaphakathi kwezi khamera zininzi iimodeli ezikhoyo Kwaye le yintengiso inyuka njengogwebu, ukuze amaxabiso ahlengahlengiswe phakathi kokhuphiswano kunye nabasebenzisi bafumane ukhetho olunomdla kakhulu kumaxabiso ahlengahlengisiweyo.
Kule meko sinethuba lokuvavanya a ikhamera yokujonga evela kwiReolink. Le yinkampani yaseTshayina enamava eminyaka kweli candelo kwaye isinika iindlela ezininzi ezikhoyo zokugada ukubekwa kweliso ekhaya, eofisini, kwindawo yokusebenza, njlnjl. Ukongeza, ngeli xesha sinesincedisi esifanelekileyo, iphaneli yelanga yokubonelela ikhamera rhoqo ngaphandle kwesidingo seentambo.
Thenga ikhamera ye-Argus PT yokujonga ividiyo apha
1 Ngokucacileyo into yokuqala sisiqinisekiso se-IP65
2 Ukuzimela ngokupheleleyo ngaphandle kwamacingo kunye nokuzimela okuhle
3 Umgangatho wevidiyo yeArgus PT
4 Ishukumisi senzwa kunye nezilumkiso zoqwalaselo
4.1 Iinkcukacha ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokuthenga le khamera
5 I-Reolink Argus PT kunye ne-Reolink Solar Panel 2 imixholo yebhokisi
Ngokucacileyo into yokuqala sisiqinisekiso se-IP65
Sijongene nemodeli yekhamera yangaphandle ngenxa yoko siyifuna ukuba ingangenwa ngamanzi kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukuba iyayichasa imozulu engalunganga. I-Reolink Argus PT kunye neReolink Solar Panel 2, zichasene ngokupheleleyo nangaphandle, ngekhe ubenangxaki nangaluphi na uhlobo koku.
Kwakhona intambo ekuphela kwayo oya kuyibona ukuba uyayenza le khamera kunye nelanga ukugcina ibhetri ihlawuliswa rhoqo yeArgus PT yakho, iya kuba yile ivela kwipaneli yelanga ukuya kwikhamera uqobo. Le ntambo ngokucacileyo ikwanokhuseleko emanzini nakumdaka, inerabha eyigubungelayo kwaye kule meko ivaliwe ngokupheleleyo ukunqanda iingxaki zalo naluphi na uhlobo. Le ntambo yoqhagamshelo yi-microUSB kwaye ngokulandelelana inendlela enye yokunxibelelana, ukusuka kwipaneli ukuya kwikhamera.
Ukuzimela ngokupheleleyo ngaphandle kwamacingo kunye nokuzimela okuhle
Uncedo lwale khamera kukuba ayinazingcingo ngokupheleleyo kwaye iyasivumela ukuba siyibeke naphina ekhayeni lethu, kwishishini okanye eofisini. Ngokwenene yenzelwe ngaphandle, kodwa inokusetyenziswa nangaphandle kwendlu ngaphandle kwengxaki okoko injalo ngaphakathi kuluhlu lweempawu zeWi-Fi.
Uncedo kukuba yongeza ibhetri egcwalisekayo esinakho ukutshaja ngentambo ye-microUSB, kodwa eyona nto ilungileyo kule meko ukuba sifuna ukuzola ngokupheleleyo kukukhetha ipakethi kunye nepaneli yelanga, ngale ndlela siya kuba nokuzimela okungapheliyo. Kufuneka kuqatshelwe koku ukuba asinakususa ibhetri.
Kwibhetri ukuba awuyithengi iphaneli yelanga yeReolink, umenzi ngokwakhe ubhengeza ukuzimela malunga neenyanga ezimbini ngaphandle kwezilumkiso okanye iintshukumo zalo naluphi na uhlobo. Kwimeko yethu kwaye emva kovavanyo olwenziwe sinokuthi inyanga iphelele kunokwenzeka ngokupheleleyo malunga nokuzimela. Zininzi iimeko ngeli xesha lokuzimela, ke kubalulekile ukuba uqwalasele ukuthengwa kwepaneli yelanga kwimeko yokufumana le khamera ikude nekhaya lethu okanye kwiindawo ezingafikelelekiyo.
Umgangatho wevidiyo yeArgus PT
Kule nto asinakuyibeka ityala, umgangatho wevidiyo onikezelwa yile khamera ulunge kakhulu. Ukunikezela ngombono wokubeka umbono wasebusuku osilungele ngokwenene, iArgus PT yongeza inzwa ye-2 megapixel ye-CMOS, ethi Thatha i-crisp, cacisa ividiyo kwiimeko ezikhanyayo.
Izinketho zokubona okanye ukurekhoda bukhoma okwenzekayo phambi kwesibukeli sokujonga ayisiyongxaki kule khamera ngenxa yomgangatho I-1080p HD ukongeza Ijikeleza ngokungathi yi-355 ° ngokuthe tye kunye ne-140 ° ngokuthe nkqo ke sinokugubungela indawo enkulu ngakumbi.
Ngokuqinisekileyo umgangatho wevidiyo yale khamera
Olu hlobo lokujika lwenziwe olwakho app enayo nenguqulelo yeMac ebizwa ngokuba ngumthengi weReolink esivumela ukuba senze iinkqubo ezifanayo nokusukela kwi-app ye-iOS, zombini ezi zixhobo zikhululekile ngokupheleleyo. Asinakufumana khadi le-MicroSD ngaphakathi kwebhokisi yokurekhoda.
Ixabiso elifanelekileyo leArgus PT
Ishukumisi senzwa kunye nezilumkiso zoqwalaselo
Ikhamera inikezela ngamathuba okwenza ukuba izilumkiso zifumaneke kwaye ezi zinokufikelela kwisixhobo sethu ngendlela eyahlukileyo. Singayifumana Izilumkiso ngezaziso, ii-imeyile, izilumkiso ze-siren okanye imiyalezo yezwi erekhodwe kwangaphambili ngexesha lokwenyani. Ngaloo ndlela Kulula ukubona ngalo mzuzu okwenzekayo kwaye ukwazi ukurekhoda lento siyibonayo ngalamzuzu.
Olunye uphawu olongezwa yile khamera yokujonga ukongeza kumbono ophilayo ziindlela ezimbini zokumamela. Ngale ndlela sinokuba ne-aculawulo olukude kwimbonakalo ebukhoma kwaye sinokumamela kwaye siphendule bukhoma kwimakrofoni eyakhelweyo kwikhamera kunye nesithethi. Olu nxibelelwano kufuneka lwenziwe ngokuthe ngqo kwisicelo ngokwaso.
Iphaneli yelanga kunye nekhamera yeReolink
Iinkcukacha ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokuthenga le khamera
Isebenza kuphela ngenethiwekhi ye-Wi-Fi ye-2.4 GHz Ke ulumke xa usenza uqwalaselo lokuqala ngeapp kunye nokwenza uqhagamshelo nge-IP akunakwenzeka, kuba sisiseko esisisiseko sokusebenzisa ikhamera ejolise kubasebenzisi ngaphandle kwamava kulungelelwaniso. Isicelo seReolink sibalulekile ekusebenziseni le khamera ukuze le khamera ingahambelani nolunye usetyenziso.
Kwelinye icala asinakwenza ushicilelo lwama-24/7 kwaye alusebenzi ne-NVR, njengoko sisitsho ziinkcukacha ekufuneka sizithathele ingqalelo ngaphambi kokuthenga le khamera kwaye kukuba asijonganga nekhamera eqeqeshiweyo, nangona Kuyinyani ukuba uninzi lwabasebenzisi lunokwanela. Kwezi meko zihlala zixhomekeke kwimfuno nganye, kodwa imisebenzi yekhamera intle ngokwenene.
Iziqulatho zebhokisi Reolink Argus PT kunye neReolink Solar Panel 2
Singatsho ukuba badibanisa yonke into ngaphandle komdlali oxhonyiweyo ukuxhoma ikhamera kunye nepaneli yelanga eludongeni. Side safumana itemplate yokwenza imingxunya eludongeni, yile I-Reolink Argus PT kunye ne-Reolink Solar Panel 2 yekhamera yemixholo yebhokisi:
Ikhamera yeArgus PT
I-eriyeli yokugubungela iWi-Fi
Spike ukuqala kwakhona ikhamera
Isibiyeli eseludongeni ukubeka iArgus PT
Izikrufu kunye neeplagi zofakelo lwenkxaso
Izitikha zokulumkisa ngevidiyo (ubungakanani obuncinci)
Thenga apha ipakethe epheleleyo yekhamera kunye nepaneli yelanga
Qhagamshela kwiwebhusayithi yeReolink
Ilula ukuyisebenzisa kwaye uyifaka
Ayinanxibelelwano lwe-ethernet yekhebula
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Sivavanye ikhamera yokujonga i-Reolink Argus PT
Ingqondo yokuba iApple AirTag ingaba njani
Imiba etshisayo kwezinye ii-Apple Watch SEs